Haayada Caalamiga ah ee Laanqayrta Cas oo cuno iyo alaabaha guryaha gaarsiisay 60,000 qof oo ku barakacay dagaalka Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaHaayada Caalamiga ah ee Laanqayrta Cas oo cuno iyo alaabaha guryaha gaarsiisay 60,000 qof oo ku barakacay dagaalka Gaalkacyo
October 29, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
ICRC oo cuno iyo alaabaha guryaha gaarsiisay 60,000 qof oo ku barakacay dagaalka Gaalkacyo. [Sawirka: ICRC / Feisal Mohamed Mukhtar]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Kadib dagaalo culus oo ku dhexmaray magaalada Gaalkacyo ciidamada dowlada Puntland iyo kuwa maamulka Galmudug, haayada Caalamiga ah ee Laanqayrta Cas (ICRC) iyo haayada Bisha Cas Soomaaliya (SRCS) ayaa u qaybiyay, bariis, digir iyo saliid in ka badan 60,000 oo dad barakacay ah.
In kamid ah 34,000 oo qof kuwaasoo qabay baahi weyn, ayaa helay maro kaneeco, marada roobka laga galo, alaabaha jikada, saxamada wax lagu shubto iyo jirgaamo. Waa jawaab ka bixintii ugu weynayd ee haayada ICRC ka samaysoa dalka sanadkan. Gargaarka cunada ayaa la filayaa in ay hayso dadkaas muddo bil ah iyadoo la filayo in xaalado ay qabowdo.
Sidoo kale meelo kumeel gaar ah oo biya lagu qaybinayo iyo booyado biyo ah ayaa la gaarsiiyay dadkaas. Haayada Bisha Cas ee Soomaaliya ayaa sidoo kale siisay adeegyo caafimaad qoysaska barakacay.
Dagaalada culus ee ka qarxay magaalada Gaalkacyo 7-dii Oktoobar ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 18 qof tobonaan kalena waa ay ku dhaawacmeen.
Haayada ICRC ayaa ku qiyaasaysa 90 boqolkiiba in dadka deegaanka Gaalkacyo ay u barakaceen tuulooyinka u dhow magaalada. Barakaca ayaa sii socda iyadoo xiisada u dhaxaysa labada dhinac ay wali jirto.
Barakacaan culus ayaa imaanaya sanad kadib si lamid ah markii ay uu magaalada ka qarxay dagaal u dhaxeeya labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug bishii December 2015-kii, kaasoo ay ku dhinteen ugu badnaan 50 qof ku dhawaad 70,000 oo qofna ay ku barakaceen.
October 11, 2016 Turkiga oo Soomaaliya u soo diray dhowr iyo toban kun oo tan oo cuno gar-gaar ah si loo gaarsiiyo dadka ay abaaraha saameeyeen